Dayax gacmeed Shiinuhu leeyahay oo dhulka ku soo dhacaya - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka CHINA MANNED SPACE AGENCY
Saynisyahanno isha ku haya burburka saldhig hawada sare Shiinuhu ku leeyahay ayaa sheegay in Jimcaha uu burburkaasi ku soo dhici doono dhulka.
Tiangong-1 wuxu qayb ka ahaa barnaamijka sahaminta hawada saree e yididiilada badan ee Shiinaha, waxaanu muunad u ahaa saldhig dad la saari karo oo Shiinuhu doonayo in uu hawada sare u diro sanadka 2022-ka.
Waxa hawada sare loo ganay sanadkii 2011 shan sanadood ka dib markii uu hawshiisii dhameeyeyna waxa la filyaa inuu dhulka ku soo dhaco.
Saacadda iyo halka uu ku soo dhacayo iyo xooggiisa lama saadaalin karo, maadaama oo aan la hagi karin.
Odoroskii u dambeeyey ee la sameeyey wuxu tilmaamayaa in goorta uu ku soo dhici karo dhulku noqon karto inta u dhaxaysa 30 Maarij iyo 2 Abriil.
Waxa la filayaa in badankiisu gubto marka uu soo galo hawada ku giblan dhulka, laakiin burburka ka hadha ayaa dhulka ku soo dhici doona.
Halkuu ku dhici doonaa?
Shiinuhu wuxu xaqiijiyey 2016-kii in xidhiidhkii saldhigga Tiangong-1 uu go'ay oo aanay hagi karin, sidaa awgeed lama oga halka burburkiisu ku dhici doono.
Wakaaladda sahaminta hawada sare ee Yurub ESA ayaa sheegtay in saldhiggaa soo dhacayaa "dhulka kaga soo beeganyahay inta u dhaxaysa 43º Woqooyi iyo 43º Koonfur" qiyaastaas oo ah bed aad u ballaadhan oo dhul badhaha koonfur iyo woqooyi ba ka xigta.
Lahaanshaha sawirka EUROPEAN SPACE AGENCY
ESA waxa kale oo ay si joogto ah u tabinaysay xog ku saabsan kolba halka uu marayo Tiangong-1, waxaanay haatan odorostay in uu dhulka ku soo dhici doono 30 Maarij ilaa 2 Abriil, laakiin waxay sheegtay in wakhtigaa ay odorostay "uu suurto galyahay in uu is bedelaa".
Wakaaladdu haatan waxay rajaynaysaa in odoroska ay samaysaa noqon doono mid sugan marka uu dhulka ku soo dhawaado horraanta todobaadka dambe.
Haatan si tartiib tartiib ah ayuu dhulka ugu soo dhawaanayaa. Agaasime ku xigeenka xarunta daraasaadka hawada sare ee Australia, Dr Elias Aboutanios, ayaa BBC-da u sheegay in "uu xawaarihiisu kordhi doono marka hawada uu dhex socdaa cuslaatoba".
Waxaanu intaa ku daray "kama dambaysta wuu kululaanayaa marka uu 100 km dhulka u soo jirsado".
Waxaanay taasi keeni doontaa in badankiisu gubto "waanay adag tahay in la saadaaliyo inta ka soo hadhi doonta ee dhulka ku soo dhacaysa maadaama Shiinuhu aanu sheegin xaddiga walxaha uu ka samaysanyahay" ayuu yidhi.
Waxaanu Aboutanios sheegay in hadii isaga oo gubanaya habeenimo uu dul maro meelo dad joogaan, muuqiisa la moodi doono xiddig xawaaraynaysa oo kale.
Halis ma ku yahay dadka?
Image caption Shiinuhu wuxu ganay Tiangong-1 sanadkii 2011-kii
Maya. Guud ahaan saldhiggan soo dhacaya ee miisaankiisu yahay 8.5 ton, hawada ayuu ku burburayaa. Waxaana laga yaabaa in qaybaha aadka u adag ee ay ka midka yihiin mishiinnada iyo taankiga shidaalku aanay wada burburin, laakiin xataa hadii qaybahaasi dhulka ku soo dhacaan, suurto galnimada ay qof ugu dhic karaan aad bay u yartahay.
Taariikhda saldhiggan Tiangong-1
Sannadkii 2011-kii ayaa Shiinuhu diray dayax gacmeed tijaabo ah oo siday xawayaan. Sanadkii 2003-diina wuxu diray cirbixiyeenkiisii ugu horeeyey ee saaran dayax gacmeed dunida ku meera. Waxaanu Shiinuhu noqday dalkii saddexaad dunida ee sidaa yeela oo waxa ka horeeyey uun Maraykanka iyo Midowgii Soofiyeeti.
Barnaamijkan saldhiga hawada sare ee Shiinuhu wuxu si xawli ah ku bilaabmay sanadkii 2011-kii markii la ganay Tiangong-1 oo magacaas oo mahnihiisu yahay "Qasrigii Hawada Sare".
Waxaana suurto gashay in saldhiggaa yar ee hawada sare ay ku jiraan cirbixiyeenno laakiin waxay ahayd uun muddo kooban oo dhawr maalmood ah. Waxaana halkaa loo diray Liu Yang oo noqotay haweenaydii ugu horaysay ee cirbixiyeen Shiine ah 2012. Qorshuhuna wuxuu ahaa in shaqadiisu dhamaato March 2016-kii oo ku beegnayd laba sanadood ka dib kolkii ay shaqadiisu dhammaan lahayd.
Haatan waxa shaqeeya oo hawada sare ugu maqan Shiinaha saldhig kale oo la yidhaa Tiangong-2, sannadka 2022 kana Beijing waxa u qorshaysan in ay hawada sare u ganto ka saddexaad oo noqon doona saldhig si buuxda u shaqeeya oo cirbixiyeenno ka hawl galaan.